စိတ်ကြိုက်နာရီ မှအကောင်းဆုံး စိတ်ကြိုက်နာရီ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Xing Heart Enterprise Partnership တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်နာရီ, ကိုယ်ပိုင်နာရီ, စိတ်ကြိုက်နာရီလက် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး စိတ်ကြိုက်နာရီ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် စိတ်ကြိုက်နာရီ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
အမည်မှာလူတစ် ဦး ၏အစနှင့်ဇာတ်လမ်း၏အစဖြစ်သည်.ဘဝအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကကျွန်ုပ်တို့ကိုမတူညီသောအမြင်ဖြင့်အသက်ရှင်စေသည်.ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူထားခဲ့တဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေဟာမမေ့နိုင်စရာ၊.ဟုတ်လား’sa hug,ကျေးဇူးတင်ပါတယ်,ဒါမှမဟုတ်ထိတွေ့မှုတစ်ခု,ယခုတွင်သင်သည်၎င်းကို pointer တစ်ခုထဲသို့ချရန်အခွင့်အရေးရှိသည်.မိနစ်ပိုင်းလက်မှာထူးခြားတဲ့နာမည်ပေးပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဝါကျကိုရေးပါ.တစ်နာရီလက်ကိုထူးခြားသောတန်ဖိုးတစ်ခုပေးပါ.အဆိုပါ pointer အပေါ်နာမကိုအမှီစိတ်ကြိုက်,အချိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်,၎င်းကိုချက်ချင်းပိုမိုထူးခြားပြီးသီးသန့်ဖြစ်စေသည်,အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်နှင့်အတူအချိန်တွင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်ဟုလည်းဆိုလိုသည်.နံနက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါစေသော,နေ့တိုင်း၏အစကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သင့်နှင့်အတူလိုက်ပါ,နှင့်တစ်နေ့ချင်းစီ၏အဆုံးအားလျော့ကဲ့သို့နှုတ်ဆက်ရန်သင့်အားအတူလိုက်ပါ. အနာဂတ်နှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မည်.အနာဂတ်အတွက်ခရီးကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်. pointer စိတ်ကြိုက်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်နေသောကိစ္စရပ်များအကြောင်း ▲နာရီနာရီ-လက်တို,အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ၅ လုံးခန့်လုပ်ရန်အကြံပြုသည် ▲မိနစ်လက်-ရှည်လျားသောလက်,အင်္ဂလိပ်စာလုံး ၈ လုံးလုပ်ရန်အကြံပြုသည် ▲ရွေးချယ်စရာဖောင့်စတိုင်လေးခုပေးပါ>>>https://pes00514.github.io/ သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,သာစိတ်ကြိုက် ID ကိုပေး.နာရီနာရီ. အနက်ရောင် pointer နှင့်အတူအဖြူရောင် panel ကိုအတွက် pointer အရောင် defaults,ငွေအညွှန်းနှင့်အတူမှောင်မိုက် panel ကို. စိတ်ကြိုက်နာရီကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ထာဝရအချိန်များနှင့်အမှတ်တရများသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှပိုမိုမှုန်ဝါးလာပေလိမ့်မည်.ဓါတ်ပုံများသည်အချိန်လေးကိုထာဝရမှော်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်.ဖုန်းပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာပုံပြင်တွေနဲ့အတိတ်တွေရှိတယ်,ထို့အပြင်ယခုအချိန်တွင်သာပိုင်ဆိုင်သောပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဒေါသတို့ကိုလည်းဖုံးလွှမ်းထားသည်.အသုဘဂီတ.ကျွနုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချိန်ကိုကျောဖုံးတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်,ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌ဤလှပသောအရာအားလုံးရှိသကဲ့သို့. နောက်ကျောဖုံးကိုထွင်းထုခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သောကိစ္စရပ်များအကြောင်း ▲【41mm】33mm အချင်းနှင့်အတူ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【၃၆ မီလီမီတာ】28mm ၏အချင်းအတွင်းမှာပဲ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID ပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်.နာရီနာရီ စျေးနှုန်းမှာဓာတ်ပုံပါဝင်သည်(လူ ၂ ယောက်ထဲမှာ)ပုံတူမျဉ်းပုံဆွဲခြင်း. (ကြောင်များ/ခွေး/အရုပ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ...စသည်တို့.1 လူတစ် ဦး အဖြစ်လည်းရေတွက်နေကြသည်,အပိုလူများကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်) သင်ပုံတူထက်အခြားပုံစံများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်,နောက်ခံအဖြူရောင်တွင်အနက်ရောင်လိုင်းများကိုသင်ပုံစံချရမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့် စိတ်ကြိုက်နာရီတွေကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
စိတ်တိုင်းကျပစ္စည်းများသည်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်လူကြိုက်များသောလူကြိုက်များမှုဖြစ်လာသည် လူတိုင်းထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သည်။ နာရီတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါသင်၏စတိုင်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ထူးခြားမှုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤတွင်, သင်လို့ရပါတယ် သင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ပတ်နာရီကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ , သင်နိုင်ပါတယ် စိတ်ကြိုက်နာရီလက် , Custom Watch Dials နှင့် နောက်ကျောအဖုံး Watch ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောလက်ပတ်နာရီများသည်သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောလက်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ အမှုန်များနှင့် bezel အသေးစိတ်များမှသင့်အတွက်ထူးခြားသောနာရီတစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်နာရီ လက်ဆောင်ပေးပါ စုံတွဲများအတွက်, ကိုယ်ပိုင်နာရီ များသည်စဉ်းစားဟန်ရှိသောမွေးနေ့၊ နှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်လက်ဆောင်များဖြစ်သည်။ ထုံးစံစုံတွဲနာရီ နှင့် နှစ်ပတ်လည်နာရီ များသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင်သည် ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံနာရီများ များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံကိုနွေရာသီအားလပ်ရက်၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ကလေးများ၊ ရည်းစား / ရည်းစားသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှနာရီမျက်နှာပေါ်တွင်ကပ်ထားပါ၊ သူတို့ကိုသင်အမြဲတွေ့နိုင်သည်။ စိတ်ကြိုက်ကော်ပိုရိတ်နာရီ သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျောင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများစွာအားသူတို့၏ဆုနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သင့်တွင်ပြorနာများရှိလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။